हेमालाई आयो यति ठुलो सहयोग ! कोठामा खानेकुरा नभएपछि सहयोग माग्नु पर्यो भन्दै यसरि धरधरी रो*ईन [ भिडियो सहित ] - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/हेमालाई आयो यति ठुलो सहयोग ! कोठामा खानेकुरा नभएपछि सहयोग माग्नु पर्यो भन्दै यसरि धरधरी रो*ईन [ भिडियो सहित ]
घरेलु हिं’साको सिकार भएकी, आफ्नै पतिबाट तिरस्कृत भएकी हिमा श्रेष्ठको कहानी निकै द’र्दनाक छ। अनेक यातना सहेर बाचीरहेकी हिमाको यातनाको सिलसिला रोकिएको छैन । शारिरिक र मानसिक या’तना दिएर घर नि’काला गरी एक्लो जीवन बिताईरहेकी हिमाका श्रीमानले उनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। आफैंले जन्माएको छोरीको बावु हैन भन्ने समेत गरेपछि हिमा निकै दु:खि भएकी छिन्।
हिमाको कोठामा आएर एक महिलाले उनलाई कु’टपि’ट गरेको र चरित्र ह’त्या गरी ब’दनाम गराउन खोजेको भन्ने खुलासा गरेकी छिन् । ‘छाया’ नाम गरेकी सुनिता थापा मगरले आफुलाई या’तना दिएको भन्दै हिमाले ‘मलाई बचाउनु’ भन्दै रुँदै मिडियामा आएकी थिईन् ।
आफ्नो इज्जतमाथि अनेक प्रश्न उठाएर चरित्र ह’त्या गरी ब’दनाम गराउन खोजेको भन्दै उनीमाथि मु*द्धा हाल्न हिमा टेकु चौ*की पुगेकी थिईन् । चौकीमा जाहेरी दर्ता गरेर आएपछि हिमामाथि तिन जनाले गर्यो आ*क्र*मण गरेको खुलासा गरेकी थिईन् । यस घ’टनापछि आफ्नो मृ’त्यु भएमा छोरीहरु श्रीमानको जिम्मा लगाईदिनु भन्दै मिडियामा आएकी थिईन् ।
टेकु प्रहरीको शरणमा पुगेकी हिमामाथि आ’क्रमण गर्ने छायाँलाई प्रहरीले उनले गरेको गल्तिको क्षमा माग्ने आदेश दिएकोमा मिडियाले उनलाई प्रश्न गर्न खोज्दा मिडियाबाट भागेकी छिन्। मिडियामा आएर हिमा समू प्रायश्चित गरेकी छायाँ अहिले आफुले मिडियामा बोल्नु पर्दा मिडियाबाटै टाढा भागेकी छिन् । श्रीमानले बेवास्ता गरेपछि अनेक दु:ख भोगेकी हिमाले अहिले पनि आफ्नो संघर्षको यात्रा जारि नै राखेकी छिन् ।
श्रीमानबाट र समाजबाट तिरस्कृत भएकी हिमाको संघर्ष र दुखको अनुभव गरेर अहिले उनलाई सहयोग आएको छ । दुई छोरीको जीवनको लागि अनेक दु;ख कष्टबाट गुग्रेकी हिमालाई यति सहयोग आउँदा उनी धरधरी रोइन् । आखिर छोरा छोरीको माया आमाले भन्दा अरु कसले बुझ्न सक्छ र ? हेर्नुस् हिमाले पोखेको खुसी र दु:खका कुराहरु भिडियोमा :
कुमार कार्कीको फोटो पहिलो पटक मिडियामा,कुमारको घर पुग्दा श्रीमतीको आशु रोकिएन, रोएरै सकियो अन्तर्वार्ता (भिडियो)
विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि फेसबुक लाइभमा आस्था आँसु (भिडियो)